မနေ့ကမှထွက်တဲ့ Drama အသစ်စက်စက်လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..အားလုံးသိကြတဲ့
အတိုင်းပဲ ဒီဇာတ်ကားဟာ မထွက်ခင် သုံးလလောက်အလိုကတည်းက တကယ်ရေပန်းစားနေတဲ့
ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မင်းသားကလည်း အချစ်တော် လီမင်ဟိုနဲ့မင်းသမီးကတော့ ကို၇ီးယားနိုင်ငံ
၇ဲ့ National Love လို့တောင်တင်စားရတဲ့ ဂျန်ဂျီဟွန်းပေါ့..ဒီလိုနာမည်ကြီးဇာတ်ကောင် ၂ခုအပြိုင်
ပါဝင်တဲ့Legend Of The Bluesea ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဟာ Nov 16 မှာစတင်ပြသခဲ့ပါပြီ
ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်သူဒါရိုက်တာကတော့ Jin Hyeok ဖြစ်ပါတယ် အပိုင်း ၂၀ ပြသ
သွားမှာဖြစ်ပြီး ဇန်န၀ါရီ 19 ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးအပိုင်းကိုတင်ဆက်သွားပါမယ် ထုတ်လွှင့်တဲ့
ရုပ်သံလိုင်းကတော့ SBS ဖြစ်ပါတယ်
ဒီဇာတ်ကားဟာ လီမင်ဟိုတစ်ယောက် စစ်တပ်မှာ ၂ နှစ်အမှုမထမ်းခင် သရုပ်ဆောင်တဲ့
နောက်ဆုံး ဒရာမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်..ပြီးတော့မင်းသမီး ဂျန်ဂျီဟွန်းကလည်း သူကလေးမွေးပြီး
နောက် ပထမဆုံး ပြန်လည်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဒရာမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းကို
သြဂုတ်လ 19 ရက်နေ့ကနေစတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ် Palau ကျွန်း နဲ့ Goesan တို့မှာရိုက်ကူးထားပြီး
နောက်ဆုံး စပိန်မှာလည်း သွားရောက်ရိုက်ကူးထားပါတယ်
၁၅၈၆ ခုနှစ် မှာ ရွာတစ်ရွာမှာမုန်တိုင်းအသည်းအသန်ကျပြီးတဲ့နောက်
ပင်လယ်ပြင်ကနေ ရေသူမ မျိုးဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဟာ
မုန်တိုင်းကြောင့် သောင်တင်ခဲ့ပါတယ်..ရွာအုပ်ချုပ်သူက ဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီး
မြို့တော်ဝန်ဟာသနားပြီး ရေသူမ ကို ပင်လယ်ထဲပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်
မြို့တော်ဝန်ရဲ့လက်က အထိန်းအမှတ် ကျောက်စိမ်းလေးကို
နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 430 ကြာတဲ့အခါမှာတော့
စိတ်ညို့ပညာရှင် တစ်ဦးပါ တနည်းအားဖြင့်
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မြို့တော်ဝန်လေး ဒန်ယောင်း
လူဝင်စားတဲ့သူပေါ့ ..သူဟာ ရေသူမလေးကို ရဲလက်အပ်လိုက်ပေမယ့်
နောက်ကြောင်းစုံစမ်းတဲ့အခါ နှစ်ပေါင်း 400 ကျော်သက်တမ်း
ကြာပြီး ဒေါ်လာ 6သောင်းလောက်တန်တယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါ
ဒီလိုနဲ့ သူတို့တွေဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ဒန်ယောင်းကရော
Labels: Legend OF The Blue Sea Series
ခုနှစ်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေထဲ အောင်မြင်မှုတော်တော်များများရခဲ့ပြီး မြောက်အမေရိက၊ ထိုင်ဝမ်၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ စင်ကာပူ၊ဗီယက်နမ်တို့မှာပါ ပြသခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပါ။ မင်းသား ကင်ဝူဘင်ကို အများကြီးအောင်မြင်ခဲ့စေတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး Professionalေ ဖာက်ထွင်းရေးသမားတစ်ဦး နဲ့ အစီအစဉ်ချတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ဦးတို့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လူမိုက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက လာအပ်ရာက စတင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲလှတဲ့ လုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဟက်ကာတစ်ဦးကိုလည်း သူတို့ခေါ်ယူခဲ့ရပြီး လူမိုက်အဖွဲ့က ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးရာမှာတော့ သူတို့ပါ အသက်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံလာရပါတော့တယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို Personal အရပြောရရင်တော့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေထဲ အတော်သဘောကျမိတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာလည်း ဟောလိဝုဒ်ကားတွေထက်မနိမ့်တဲ့ လှည့်ကွက် မြှုပ်ကွက်မျိုးနဲ့
ပရိသတ်ကိုဖမ်းစားသွားတဲ့ကားပါ။ ဒရာမာလည်းမဟုတ် ၀ုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းလည်းမဟုတ်ပဲ တစ်ကားလုံး စိတ်ဝင်စားစရာအပြည့်နဲ့ ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားတာမို့ ပရိသတ်တွေ သဘောကျကြမှာ သေချာပါတယ်။
Translated by: Alice Ei Phyu
Encode by: Eric Min Khant
Watch And Download Pcloud (850MB)
Watch And Download Direct Link (850MB)
Madras Cafe (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb Rating (7.8/10) Rotten Tomatoes (74%) ထိရရှိထားတဲ့ Action, Drama, History အမျိုးအစား
မင်းသားကြီး John Abraham ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေအကြိုက်တွေ့ဦးမယ့် Agent ဇာတ်ကားမျိုးပါ။
Credit To : channelmyanmar.org
ဒီဇာတ်ကားကို အရွယ်မရောက်သေးသူများမကြည့်သင့်ပါ။ Nudity အခန်းတချို့ပါပါတယ်။
ဇာတ်ကားကလဲ Psycho ဆန်ပြီး Sexual Pleasure နဲ့ Car Crash ကို တွဲဖက်ပြထားပါတယ်။
ဝေဖန်သူတချို့ရဲ့ ထောက်ခံမှုရရှိထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ IMDb Rating(6.4/10) ပါ။
Watch And Download Pcloud (800MB)
Watch And Download Pcloud (299MB)
Watch And Download Direct Link (299MB)
The Eyes Of My Mother(2016)မြန်မာစာတန်းထိုး
မင်္ဂလာပါ ခုတစ်ခါကတော့Horror ဇာတ်လမ်းကြိုက်တယ့်သူတွေအတွက်ပါ ဒါရိုက်တာ Nicolas Pesce ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း Black&White နဲ့ရယ် ကင်မရာအငြိမ်ရယ်နဲ့ရိုက်ထားတာပါ
"ဖရန်စစ်စကာ"ဆိုတဲ့ကလေးမလေးရဲ့မိခင်ကမျက်စိခွဲစိတ်ဆရာဝန်ပါ သူ့သမီးကိုလဲနွားမျက်လုံးတွေနဲ့ပြသခဲ့တယ် သူမငယ်ရွယ်စဉ်လေးမှာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ရက်စက်စွာသေဆုံးခြင်းကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ် မိခင်သင်ကြားပေးခဲ့သလို အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် စိတ္တဇဆန်ဆန်တွေလုပ်ခဲ့တယ် ဖခင်ကလဲဆုံးပါးသွားခဲ့တယ့်နောက် တစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့ရှာပြီး ရက်ရက်စက်စက်အပြုမှုတွေလုပ်တာကိုတော့ ဇာတ်ကားမှာပဲ ရင်တဖိုဖိုနှင့် ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ပါနော်
Review & Translate by Wai Mar Kyaw
Udta Punjab (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
M.S.Dhoni:The Untold Story (2016)မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီကားလေးကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ခရစ်ကက်ကစားသမား မဟီဒရာဆင်းဒွန်နီရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ခရေစေ့တွင်းကျကျ ရိုက်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒွန်နီဟာ အိန္ဒိယခရစ်ကက်လက်ရွေးစင်အသင်းကို ဆယ်စုနှစ်မျာစွာ ဝေးကွာနေတဲ့ ICC Cricket World Cup ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပြီး လက်ရှိအိန္ဒိယအသင်းခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လောကကြီးက ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ပုံသေကားချပ်တစ်ခုလို ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ ဘယ်အချိန် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကြိုသိခွင့်မပေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ဘောလုံးအားကစားကိုသာ ဝါသနာပါတဲ့ ဒွန်နီဟာ ဆရာကောင်းတစ်ဦးရဲ့ စောင်မမှုကြောင့်သာ သူ တကယ်ပါရမီရှိတဲ့ တကယ်အောင်မြင်မယ့် ခရစ်ကက်အားကစားနည်းနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီး အိန္ဒိယရဲ့ ခရစ်ကက်အကျော်အမော်ဖြစ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ Neeraj Pandey က ဇာတ်ကားကို ICC Cricket World Cup ဗိုလ်လုပွဲမှာ အိန္ဒိယအသင်းနဲ့ သီရိလင်္ကာအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်နေပုံနဲ့ စဖွင့်ထားပါတယ်။ အိန္ဒိယအသင်းဟာ သီရိလင်္ကာအသင်းရဲ့ ကစားပုံအောက်မှာ အရေးမလှဖြစ်နေပြီး အမှတ်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်မှာတော့ နားနေခန်းထဲကနေ ပွဲကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဒွန်နီက ကိုယ်တိုင်ဝင်ကစားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ နည်းပြနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ကွင်းထဲကို ဝင်လာခဲ့တဲ့ အချိန်မှာတော့ အိန္ဒိယအသင်းရဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ ဒွန်နီရဲ့နာမည်ကို အားကိုးတကြီး ဟစ်ကြွေးနေကြပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ဒွန်နီ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ (၁၉၈၁)ခုနှစ်ဆီ ပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဒွန်နီရဲ့ ငယ်ဘဝဖြတ်သန်းပုံတွေ၊ ဘဝရဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကို စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ပုံတွေ၊ အချစ်ရေးမှာ ခံစားခဲ့ရပုံတွေအပြင် အောင်မြင်မှုကို ဘယ်လိုရယူခဲ့သလဲဆိုတာတွေကို စွန့်စားခန်းဝတ္ထုတစ်ပုဒ် ဖတ်နေရသလိုမျိူး ရင်​ဖိုလှိုက်​​မောစွာ ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
IMDb Rating 8.1 ရရှိထားပြီး အကဲဖြတ်တွေရဲ့ ချီးကျူးမှုတွေတသီကြီး ရရှိထားတဲ့ ဒီကားဟာ ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်မဖြစ်အောင် ပုံဖော်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်အတတ်ပညာကိုလည်း တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပြီး ခရစ်ကက်အားကစားနည်းရဲ့ အနုပညာကိုပါ ခံစားခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။o
Watch And Download Pcloud (1.2GB)
Watch And Download Direct Link (1.2GB)
Watch And Download Pcloud (510MB)
Watch And Download Direct Link (510MB)
Labels: Bollywood, History, sport
Ghost Ship (2002) - မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb 5.5 ရထားတဲ့ Horror ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်…
သမားရိုးကျ အိမ်အိုတစ်လုံးအတွင်း သရဲခြောက်တာတွေ သရဲပူးတာတွေ ကို ကြည့်ရတာ ရိုးလာတဲ့သူတွေအတွက်
ထိတ်လန့် ခြောက်ခြားတာကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ အတွက် ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင် ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ ပင်လယ်အတွင်း ပိုင်ရှင်မရှိသော သင်္ဘောတွေကို ဆယ်ယူပြီး ပြန်ရောင်းကာ ဝေစုခွဲယူကြတဲ့
ရှာဖွေရေး အဖွဲ့တစ်ခု ရှိပါတယ် ခေါင်းဆောင် မာဖီ က ဦးဆောင်ပြီး အတော်ဆုံး လူတွေ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်..
တစ်ရက်မှာတော့ သူတို့ အဖွဲ့ ၆ လ အကြာ ပင်လယ်ပြင်တွင် အချိန်ကုန်ခံရှာဖွေခဲ့တဲ့ သင်္ဘောတစ်စီး အတွက် ဘား မှာ အောင်ပွဲခံ
သောက်နေကြတုန်း လူငယ်တစ်ယောက်က သူတို့ အဖွဲ့ကို ပျောက်ဆုံးနေသော မှော်ဆန်တဲ့ သင်္ဘောကြီး တစ်ခုအကြောင်း
သတင်းလာပေးပါတယ်.. ထို သင်္ဘေင်္ာကြီးမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသော လူအချို့နှင့်ဝန်ထမ်း အားလုံးပေါင်း ၆၀၀ ကို တင်ဆောင်ပြီး
အကြောင်းကိစ္စ တစ်စုံတစ်ရာ မသိရပဲ သတင်းမကြားရပဲ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ သင်္ဘောကြီး ဖြစ်နေပါတယ် နစ်မြုတ်သွားတယ်လို့လဲ မသိရ
အကျော်ကြားဆုံး ရှာဖွေရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင် ရှာမတွေ့ခဲ့တဲ့ သင်္ဘောကြီး အဖြစ် မှတ်တမ်း တင်ထား၍ ၄င်းတို့ အဖွဲ့လဲ လူငယ်ဖြစ်သူနှင့်
ရာခိုင်နှုန်း ခွဲဝေယူရန် ကတိပေးလိုက်ပြီး သင်္ဘောကြီးကို စတင်ရှာဖွေပါတော့တယ်….
ထို သင်္ဘောကြီးမှာ သူတို့ ထင်ထားခဲ့သလို ရိုးရှင်းလှသော အရာတစ်ခုမဟုတ်ပဲ ရက်စက်မှုတွေ လျို့ဝှတ်မှုတွေ
သစ္စာဖောက်မှုတွေ နဲ့ ကျိန်စာသင့်ပြီး မလွတ်မြောက်နိုင်သော ၀ိဥာဉ်များ ရဲ့ ခိုအောင်းရာ နေရာတစ်ခုဆိုတာကို မသိခဲ့သောအခါ…
ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ CM Translator တစ်ဦး ဖြစ်သူ Kaung Myat Thu ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
(Thit San Khant)
Watch And Download Pcloud (970MB)
Watch And Download Direct Link (970MB)
Watch And Download Pcloud (390MB)
Watch And Download Direct Link (390MB)
How you can stop if you can’t see the enemies are coming?
“ရန်သူတွေ လာနေတာ မမြင်ရရင် မင်းဘယ်လို တားဆီးမလဲတဲ့”။ ခုတလော သည်းထိတ်ရင်ဖိုအက်ရှင်ကားတွေကို တင်ဆက်တဲ့နေရာမှာ အလွန်ကျော်ကြားနေတဲ့ Netflix ရဲ့ Scifi-Thriller ဟာ နာမည်ကြီး အက်ရှင်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gears of War ကို ဂြိုလ်သားတွေနဲ့ ပေးတွေ့လိုက်ပါပြီ။ Pacific Rim တို့ Battleship တို့လိုပဲ သဘာဝလွန်စွမ်းအားတွေရှိတဲ့ တခြားကမ္ဘာက ဂြိုလ်သားတွေနဲ့ အသေအကြေ တိုက်ခိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ Spectral ကို သိပ္ပံကား၊ စစ်ကားဝါသနာအိုးတွေသာမက သည်းထိတ်ရင်ဖိုကြိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်များကပါ ချီးကျူးကြပါတယ်။ ဂိမ်းဝါသနာအိုးတွေအတွက်တော့ မကြည့်မိရင် သူများနောက်ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ကမ္ဘာမြေကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဂြိုလ်သားတွေကို သူသေကိုယ်သေပြန်တိုက်ပေးရတဲ့ special operation တပ်သားတွေရဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ခုအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုရိုးရှင်းတဲ့ စစ်ကားတစ်ကားကို ဆွဲဆောင်ထားတာကတော့ သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့ နည်းဗျူဟာတွေ၊ သုံးတဲ့ လက်နက်ဆန်းတွေနဲ့ ဂြိုလ်သားတွေရဲ့ သဘာဝလွန်စွမ်းအားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကားဆို သိပ်မကြိုက်တဲ့ သူတောင် Trailer ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ မျှော်လင့်သွားမိမှာ သေချာတာမို့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ကြောင်း လက်တို့လိုက်ရပါတယ်။
Review by Waiyan Philip
Translator by Hnin Hnin
Only Yesterday (1991) မြန်မာစာတန်းထိုး
ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတွေကို အေးအေးဆေးဆေးခံစားလိုတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် Studio Ghibli ရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့
မိတ်ဆက် ပေးပါရစေ ..။
ဇာတ်ကားလေးက Only Yesterday တဲ့ ..
IMDb မှာ Rating 7.7 ရရှိထားတဲ့ အပြင် ၁၉၉၁ ခုနှစ်ရဲ့ ဂျပန်ပြည်မှာ ၀င်ငွေ အများဆုံးရနိုင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ..။
ဇာတ်ကြောင်းကတော့ တော်တော်လေးရိုးစင်းပါတယ် ..။
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ရုံးဝန်ထမ်း ကောင်မလေး တစ်ယောက် အားလပ်ရပ်မှာ ကျေးလက်တောရွာလေးကို သွားလည်ရင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတာလေးတွေကို
သူငယ်ငယ်က အကြောင်းလေးတွေနဲ့ ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားသုံးသပ်မိတဲ့ အကြောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ..။
ဟင် .. အဲ့ဒါဆို ဇာတ်ကားကြီးက ပျင်းစရာကြီးပဲ လို့ ထင်ချင်ထင်မိနိုင်ပါတယ် ..။
ဒါပေမယ့် စကြည့်မိရင် ပြသချိန် ၂ နာရီနီးပါးကို ဘယ်လို ကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်း မသိနိုင်လောက်တဲ့ အထိ ဇာတ်ကားရဲ့ ညှို့ဓာတ်က ပြင်းပါတယ် ..။
ဘာတွေ များ ထူးထူးခြားခြားတွေ ပါနေလို့ လဲ လို့ မေးရင် ဘာမှထူးထူးခြားခြားမပါပါဘူးပဲ ပြန်ဖြေရမယ် ..။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ လောကကြီး နဲ့ သဘာဝတရားကြီးရဲ့ ရှင်းလင်းတိကျလွန်းလို့ လူတွေမသိလိုက် မသိဘာသာဖြစ်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကို
တစ်ခုချင်းစီ ဆွဲထုတ်ပြီး မီးမောင်းထိုးပြသွားတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုး ဖြစ်နေလို့ပါပဲ ..။
ဇာတ်ကားအကြောင်း ပြန်ပြီး ခြုံငုံပြန်ပြောရရင်
မြို့ပေါ်မှာ ကြီးပြင်းလာရပေမယ့် ကျေးလက်တောရွာကို ချစ်ခင်တွယ်တာတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်း ..။
မြို့ပြရဲ့ မွန်းကျပ်မှုတွေကို ပိတ်ရက်ရှည်ရတိုင်း ကျေးလက်တောရွာလေးတွေကို သွားပြီး ဖြေဖျောက်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီး ..။
အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သဘာဝတရားကြီးကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်တဲ့သူလို့ ယူဆနေမိတဲ့ သူပေါ့ ..။
ဒါပေမယ့် တစ်သက်လုံး သဘာဝတရားကြီးနဲ့ ထိတွေ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ သူတွေနဲ့ ကြုံလာရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟုတ်လှပြီ ထင်နေသမျှ
ဘာမှ ပြောပလောက်စရာမရှိသေးပါလားလို့ သိသွားခဲ့ပြီး ဘ၀အတွက် အရေးပါတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချနိုင်သွားခဲ့နိုင်ပုံကို အနုပညာမြောက်စွာ တင်ဆက်ထားပါတယ် ..။
ရိုးရှင်းတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းထဲမှာ ရိုက်ပြသွားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့မဟုတ်ပါ ..။
- ဂျပန်ပြည်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်ကြီးအကြောင်း ..
- ဂျပန်ကျောင်းတွေ ရဲ့ ပညာရေးလည်ပတ်ပုံ .. ကျောင်းသားရေးရာလည်ပတ်ပုံတွေ အကြောင်း ..
- ကျောင်းတွေမှာ စာသင်ကြားရေးသာမက ဘ၀အတွက် အရေးပါတာတွေကို ပြင်ဆင်ပေးခြင်းများအကြောင်း ..
- ဂျပန်ပြည်ရဲ့ မိသားစုနေထိုင်မှု ပုံစံများအကြောင်း ..
- မိဘ နဲ့ သားသမီးကြား ဆက်ဆံရေးများ အကြောင်း ..
- လူတွေက သဘာဝတရားကြီးပေါ် မှီခိုနေတာလား .. သဘာဝတရားကြီးက လူတွေပေါ် မှီခိုနေတာလား
- သဘာဝတရားကြီးကို ဘယ်လို ချစ်ရတာလဲ
- ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအတွက် ဘယ်အရာက အရေးပါဆုံးလဲ ..
အစရှိတဲ့ မရေရာတဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေတွေကိုလည်း တစွန်းတစ အားဖြင့် စိတ်ထဲ အလင်းရစေပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးမှာ အနုပညာမြောက်စွာ ဖန်တီးချယ်မှုန်းထားတဲ့ သရုပ်ဖော်မှု တွေကြောင့် Anime ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်နေရတယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးထက်
သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပန်းချီကားတွေကို ခံစားနေရသလို ရသမျိုး ပေးနိုင်ပါတယ် ..။
နောက်ပြီး ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကို တမြေ့မြေ့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ နောက်ခံတေးဂီတရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကြောင့် ကိုယ့်ပတ်ပတ်လည်မှာကို
သဘာဝတရားကြီးရဲ့ ထိတွေ့ပွတ်သပ်မှုတွေ ၀န်းရံနေသလို ခံစားချက်မျိုးရနိုင်ပါတယ် ..။
အထူးသဖြင့် ညွှန်းလိုတာကတော့ အဆုံးသတ် Theme Song ဖြစ်တဲ့ Ai ha Hana ha Sono Tane ပါပဲ ..
Amanda McBroom ရေးသားပေးပြီး Bette Midler သီဆိုခဲ့တဲ့ The Rose သီချင်း ရဲ့ Japanese Version ပါ ..။
Westlife အပါအ၀င် တော်တော်များများ ပြန်ဆိုကြတာကို နားထောင်ဖူးပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားထဲကလောက်
ရင်ထဲကို ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ဖြစ်အောင် မခံစားခဲ့ရဖူးပါဘူး ..။
စာတန်းထိုးရင် ပြီးပြီဆိုပြီး ဇာတ်ကားကို ပိတ်မပစ်လိုက်ကြဘဲ ခံစားကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် ..။
မိတ်ဆွေတို့ ဟန်ဆောင်ဖူးပါသလား ..။
ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ ဟန်ဆောင်ဖူးပါသလဲ ..။
ဟန်ဆောင်နေရင်းနဲ့ ကိုယ်ဟန်ဆောင်နေတဲ့ အပိုင်းကို ကိုယ့်ဘာသာကို အမှန်လို့ မြင်လာမိတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ဖူးလား ..။
ဒီ ဇာတ်ကားလေးက မိတ်ဆွေတို့ စိတ်ထဲက ကိုယ့်ဘာသာသတိမထားမိဘဲ အယောင်ဆောင်နေမိတာတွေကို
တစ်ခုချင်းစီ ပြန်မြင်ယောင်လာမိပါလိမ့်မယ် ..။
Review by: mG kAUNG
Translate by: Seint Seint Soe
Encode by: Waiyan Philip
Next Avengers : Heroes of Tomorrow(2008) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Avengers2: Age of Ultron မှာ Ultron ကြီးကို Avengers တွေ အနိုင်တိုက်တာ တွေ့ခဲ့မှာပါ။ ဒီ Animation မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Ultron အနိုင်ရသွားခဲ့ပြီး Avengers တွေ သေဆုံး၊ ထွက်ပြေး၊ တိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပါပြီ။ Avengers တွေရဲ့ မျိုးဆက်သားသမီးတွေကို Tony က လျို့ဝှက်စောင့်ရှောက်ထားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းစေဖို့ လုံးဝထိန်းချုပ်ထားမှဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ Ultron၊ Avengers မျိုးဆက်တွေရှိနေတာကိုက အန္တရာယ်ရှိနေပြီလို့ တွေးမိတဲ့ Ultron က သူတို့အားလုံးနောက်ကို လိုက်ရှာတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါ…..
File Size : 500/250 Mb
Duration : 1 : 18: 02
Translator : Hein Khant Aung
Watch And Download Pcloud (250MB)
Watch And Download Direct Link (250MB)
Sausage Party (2016) Rated R - မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီ Animation ရုပ်ရှင်ဇတ်ကားကို Sony Picture နှင့် Columbia ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီ မှ စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်
IMDb 6.7/10 ထိ ရရှိထားပြီး Rated R အဆင့် သက်မှတ်ထားလို့ အသက်မပြည့်သေးသော
ကလေးသူငယ်များ နှင့် မိသားစု များ အတူတူ မကြည့်သင့်သော Animation ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်..
Directors: Conrad Vernon, Greg Tiernan တို့ ရိုက်ကူးကာ
August 12, 2016 (USA) မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး
Box office: 129.1 million USD ရရှိခဲ့ပါတယ်..
ဒီဇတ်လမ်း အညွှန်းကို မပြောပြခင် ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့ Translator တွေ ရဲ့ စိုးရိမ်မှု ကိုပြောပြပါရစေ..
ဒီဇတ်လမ်း တစ်ခုလုံးမှာ စကား ၃ ခွန်း ပြောရင် ၂ ခွန်းက အဆဲစကား ပါပါတယ်…
Channel Myanmar မှာ မသင့်တော်သော ဆေးထိုးမှု များ ဘမ်းစကား များ မထည့်တော့တာ အတော်ကြာပါပြီ
ဒါပေမယ့် အဆဲလွတ်အောင် ဘာသာပြန်ရင်လဲ ရသတွေ ပျက်ကုန်မှာဆိုးတဲ့ အတွက် ကျနော်တို့
ငိုးမ လခွမ်း ဆိုတဲ့ စကားတွေ တွင်တွင် သုံးထားပြီး မူလ အရသာ မပျက်အောင် ကြိုးစားပေးထားပါတယ်
ထို့ကြောင့် ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိတ်သက်များကို ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါတယ် ရုပ်ရှင်အရသာ ပျက်သွားရင်
ကျနော်တို့ လိုအပ်နေသေးတာ ဖြစ်ပြီး ဖြည့်စွတ်ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ …..
Translator တွေကတော့ Tariq L Walker . Ye Khant Min , Moe Oo Mann တို့ ဖြစ်ပြီး
Admin Little Neo မှ စကားလုံးများ ပြေပြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်…
ဇတ်လမ်း အစမှာတော့ စားစရာတွေ ရောင်းတဲ့ စူပါမားကတ် ကနေ စတင်ထားပါတယ်…
စားစရာတွေဟာ လူသားတွေကို ဘုရားသခင် လို့ မှတ်ယူထားပါတယ် မားကတ် မှာ ပုတ်သိုးမယ့် အန္တရာယ် ကနေ
ကယ်တင်မယ့် အရှင်သခင်တွေလို့ မှတ်ယူထားကြတာပါ…
တစ်နေ့တာ ဈေးဝယ်မှု မှာ ၀ယ်သူ ရွေးချယ်ဖို့ သူ့ထက် ငါ အပြိုင်အဆိုင် ဆုတောင်းကြရတာပေါ့
မဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင် Out Of Date ဖြစ်သွားတဲ့အခါ သူတို့မသွားချင်ဆုံးနေရာက အမှိုက်ပုံးအိုကြီးရဲ့ မဲမှောင်နေသာ
ဒီဇတ်လမ်းမှာ မင်းသားကတော့ ၀က်အူချောင်း ပါပဲ ဟုတ်ပါတယ် ၀က်အူချောင်း ပါ….
ဖရန့် ၊ ကားလ် ၊ ဘယ်ရီ တို့ ဟာ ၆ ချောင်းပါတဲ့ ၀က်အူချောင်းပါကင် ထုပ်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေပေါ့
သူတို့ ဘေးကပ်ရပ်မှာတော့ ဟော့ဒေါ့ပေါင်မုန့်မလေး တွေ အဖွဲ့ ရှိနေပါတယ်
ဘရန်ဒါ တို့ အုပ်စုပေါ့ သူတို့လဲ ပါမုန့်ချောင်း ၆ ခု တစ်ပါကင် ထုပ်ထဲကပါပဲ…
အနီးကပ် နေရတဲ့ အခါ တစ်ဦးကို တစ်ဦး စိတ်ဝင်စားပြီး ချစ်မိပါလေရော
အ၀ယ်ခံရတဲ့ အခါ အတူတူပါဖို့လဲ ဆုတောင်းကြရတာပေါ့… 😀
တစ်ရက်မှာတော့ ဖရန့် တို့ ပါကင်ထုပ် ရော ဘရန်ဒါ တို့ ပါကင်ထုပ်ရော အ၀ယ်ခံရပါတယ်
ဒါပေမယ့် စိတ်ဖောက်နေတဲ့ ပျားရည်မုန်ညင်းဗူး က သေကြောင်း ကြံစည် လို့
မတော်တဆ မှုတွေ ဖြစ်ပြီး ဖရန့် ရော ဘရန်ဒါ က ဘုရားသခင်(ဈေးဝယ်သူ) ဆီကနေ
ဖရန့် နဲ့ ဘရန်ဒါ တို့လဲ သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ အတူ ဘုရားသခင်(ဈေးဝယ်သူ) ဆီ ပြန်သွားလို့
လမ်းစ ရှာရင်း နဲ့ ဘုရားသခင် (ဈေးဝယ်သူ) က သူတို့ကို ကြင်နာမှာ မဟုတ်ပဲ စားသုံးဖို့ သက်သက်ဆိုတာ
(ရုပ်ရှင်ရဲ့ အချိန် 00:44:45 နေရာရောက်လို့ ကြည့်မိတဲ့အခါ ၀ါးလုံးကွဲ မရယ်မိဖို့ သတိပြုပါ ကျော်မကြည့်နဲ့နော် 😛 )
Watch And Download Pcloud (630MB)
Watch And Download Direct Link (630MB)
Watch And Download Pcloud (318MB)
Watch And Download Direct Link (318MB)
Ben-Hur (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာဂရုဏာတော်ကို အောက်မေ့တမ်းတဖွယ် တင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
Ben-Hur ရုပ်ရှင်ဟာ ဒီနှစ်ရဲ့ သြဂုတ်လ 16 ရက်မှာ စတင်ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ သမိုင်းနောက်ခံ အက်ရှင်ဒရာမာကားတစ်ကားပါ။ 2016 အတွင်း ဘတ်ဂျက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ကားတွေထဲမှာ အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ 1959 ခုနှစ်က အောင်မြင်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ သမိုင်းနောက်ခံ Ben-Hur ခေတ်ဟောင်းရုပ်ရှင်ကိုပဲ ပြန်လည်းဆန်းသစ်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။ ရာဇ၀င်ကားကြီးတွေ၏ ထုံးစံအတိုင်း လူအင်အားကောင်းကောင်း၊ ဆက်တင်ကြီးကြီးတွေနဲ့ အားထုတ်ရိုက်ကူးခဲ့ပေမဲ့ ရုံဝင်ငွေကတော့ မျှော်မှန်းသလောက် အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး။
ရုပ်ရှင်ကိုတော့ ခရစ်တော် သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ် ရောမခေတ်ကို ဇာတ်အိမ်ယူထားပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးနဲ့ ရောမသားဆိုတဲ့ မွေးစားညီအကိုနှစ်ယောက်ကြား ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းနဲ့အတူ၊ အရမ်းချစ်ခင်ကြတဲ့ ညီအကိုနှစ်ဦးရဲ့ အိမ်အပြန်ခရီးတွေဟာ သူတို့မိသားစုအတွက် မမျှော်လင့်လောက်အောင် ခက်ခဲတဲ့ အနာဂတ်တွေကို သယ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့အတူ အမုန်း၊ အာဃာတ၊ အာဏာတွေကြားက အားပြိုင်မှုတွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရောမခေတ်က စစ်ရထားပြိုင်ပွဲကြီးတွေကိုလည်း ရင်တစ်ဖိုဖိုနဲ့ ကြည့်ရူ့ရမှာပါ။ ဒီရုပ်ရှင်မှာ ထိုစဉ်အချိန်က သက်ရှိထင်ရှားရှိဆဲ ခရစ်တော်၏ ပုံရိပ်ကိုပါ ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားပါတယ်။
Rating ကောင်းမှ ကြည့်သူတွေအတွက် သတိပေးလိုတာကတော့ ဒီကားဟာ rating ပိုင်းမှာ အားနည်းခဲ့ပေမဲ့ ကြည့်လို့အဆင်ပြေပါတယ်။ သမိုင်းနောက်ခံ ရာဇ၀င်ကားကောင်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအဖို့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အနီးစပ်ဆုံးနှိုင်းပြရရင် နာမည်ကျော် ရောမကားဖြစ်တဲ့ Gladiator နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ဖန်တလဲလဲမြင်နေရတဲ့ ကိုးရီးယားစီးရီးတွေ၊ လူစွမ်းကောင်းရုပ်ရှင်တွေကနေ သွေဖယ်ပြီး ရာဇ၀င်ကားကောင်းတစ်ကားကို ဖြေးဖြေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးကြည့်ချင်သူတွေအဖို့ နှစ်ခါမစဉ်းစားသင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းဆိုတာလောက်ပဲ အညွှန်းပေးချင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရူ့ခံစားကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။(PG-13 အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်)
(Han Tar မှဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားတာပါ။)
Watch And Download Pcloud (999MB)
Watch And Download Direct Link (999MB)
Watch And Download Pcloud (440MB)
Watch And Download Direct Link (440MB)
Mindhunters (2004) - မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb 6.4/10 ထိ ရထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီး
သည်းထိတ်ရင်ဖို လျို့ဝှတ်ချက်တွေ အပြည့် နဲ့ ဇတ်လမ်း မျိုးဖြစ်ပါတယ်…
18+ အခန်း တစ်ချို့ နှင့် သွေးထွက်သံယို အခန်းများ ပါဝင်၍ ကလေးသူငယ်များ
နှလုံးရောဂါ ရှိသူများ ကြောက်တက်သူများ ကြည့်ရှုရန် မသင့်တော်ပါ
FBI မှ သူတို့ ဆီမှ အတော်ဆုံး လူ တစ်ချို့ကို စုစည်းပြီး လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းပေးဖို့အတွက်
လူပုံတူ အရုပ်နှင့် အဆောက်အဦးများသာ ရှိသော မှုခင်း စမ်းသက်ကွင်း သဖွယ် ဖန်တီးထားသော
အိုနေဂါ ကျွန်းပေါ်သို့ ပို့ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် အလုပ်လုပ်တက်စေရန် မှုခင်း ဖော်ထုတ်မှု မြန်ဆန်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်..
FBI အေးဂျင့် တွေ အနေနဲ့ ထို တန်းဆင်း လေ့ကျင့်မှု အောင်မြင်မှာသာ ပြန်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့်
ထို ကျွန်းက သူတို့အတွက် မပြန်လမ်း တစ်ခု အဖြေရှာမရသော ပုဒ်စာ တစ်ခု ဆိုတာ သိရှိလိုက်ရချိန်မှာတော့…
ဒီဇတ်ကားကို CM Translator ဖြစ်သူ Tariq L Walker မှ ဘာသာပြန်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..
Watch And Download Pcloud HD (760MB)
Watch And Download Direct Link HD (760MB)
Watch And Download Pcloud (450MB)
Watch And Download Direct Link (450MB)
Kubo and the Two Strings ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Watch And Download Pcloud(620MB)
Just The Way You Are (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီတစ်ခါတော့ ပရိသတ်ရင်ထဲရောက်မယ့် တစ်ကားတင်ပေးလိုက်မယ်ဗျာ … ကျွန်တော်တောင် ဘာသာပြန်နေတာကို ရပ်ပြီး ဇာတ်လမ်းဆုံးအောင် ကြည့်မိတဲ့ကားလေးပေါ့ … Just the way you are တဲ့ …. ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ မိသားစုကြောင့် အချစ်ကိုအယုံအကြည်မရှိတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်းမလေးတို့ အလောင်းအစားတစ်ခုကြောင့် ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာ ဘာတွေဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် … ထုံးစံအတိုင်း Asian Romance Comedy လေးပါပဲ … အားပေးကြပါဦးနော်
Pcloud Link Direct Link
Download (760MB) Download (760MB)
Download (380MB) Download (380MB)
Labels: Asian, Comedy, Drama, Romantic
Nine Lives (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
နာမည်ကျော် သူဌေးကြီး တွမ်ဘရန့် ဟာ သူ့မြို့မှာ အထပ်အမြင့်ဆုံး အဆောက်အဦးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီး
မှတ်တမ်းဝင်နိုင်ဖို့ လုပ်နေပါတယ် ဒါပေမယ့် သူ့သမီးလေး မွေးနေ့ကိုလဲ မေ့နေပြန်တဲ့ အလွန်အလုပ်များတဲ့ သူတစ်ဦးပါ…
တွမ် မှာ ပထမ အိမ်ထောင်ရှိခဲ့ပြီး သားတစ်ယောက် ရှိပြီး ထိုသားဖြစ်သူ ဒေးဗစ် မှာလဲ ဖခင် ၏ အသိအမှတ်မပြုခံရတဲ့အပြင်
ဖခင် အား မြင်ချင်တွေ့ချင်သဖြင့် ဖခင် ၏ အလုပ်တွင် ၀န်ထမ်းလာလုပ်နေရသူ ဖြစ်ပါတယ်…
မိသားစု အား အမြဲလိုလို အချိန်ပေးဖို့ မစဉ်းစားပဲ မိမိ အလုပ်ကိုသာ ဦးစားပေးတက်သော တွမ် ၏ ဒုတိယ အိမ်ထောင်တွင်
ရရှိထားသော သမီးဖြစ်သူ ရေဗက္ကာ သည် အထီးကျန်နေသော သူမ အတွက် ကြောင်ကလေး တစ်ကောင် ပူဆာသဖြင့်
ကြောင်မုန်းလှသော တွမ် တစ်ယောက် လမ်းဘေး ချောင်ကြိုချောင်ကြား တစ်ခု မှ မစ်စတာ ပါကာ ၏ ကြောင်သီးသန့် ရောင်းသော
ဆိုင်သို့ ရောက်ရှိသွားပြီး ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကို ၀ယ်ယူလိုက်ပါတယ်…
ထိုဝယ်ယူလိုက်သော နေ့မှာပဲ တွမ် တစ်ယောက် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျကာ သူ ပြိုင်ဆိုင် ဆောက်နေသော အထပ်အမြင့်တိုက်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျကာ
သူပြန်သတိရလာသော အခါတွင်တော့ သူဌေးကြီး တွမ်ဘရန့် မဟုတ်တော့ပဲ သူ့သမီးကို လက်ဆောင်ပေးရန် ၀ယ်ယူလာသော
ကြောင်လေး တစ်ကောင်သာ ဖြစ်သွားခဲ့သောအခါ…..
ဒီ ဟာသ ဇတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ Channel Myanmar Translator ဖြစ်သူ Tariq L Walker ပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
Watch And Download Pcloud (930MB)
Watch And Download Direct Link (930MB)
Watch And Download Pcloud (370MB)
Watch And Download Direct Link (370MB)
Siren 2016 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
ကားနာမည် Siren ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကားထဲမှာထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါတစ်မျိုးပါပါတယ် အဲဒီသတ္တဝါအကြောင်းintroလေးအရင်ပြောပြပါမယ်ရှင် Sirenဆိုတာတကယ့်လောကမှာဆိုရင်ပင်လယ်နက်ထဲမှာရှိတတ်တဲ့ရေသူမလိုမျိုးပါ သူမရဲ့သီချင်းသံဟာဆိုရင် သင်္ဘောကိုဆက်မသွားနိုင်အောင်ပြုနိုင်စွမ်းရှိတယ် ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ ကုန်းနေသတ္တဝါတစ်မျိုးအဖြစ်နဲ့ပဲhorror ဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားတာပါ
မင်းသားချောChase Williansonကဂျွန်နာအဖြစ်Hannah Fiermanကသတ္တဝါကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်ဂျွန်နာရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မတိုင်ခင်bachelor partyဆင်နွဲဖို့ခရီးထွက်လာကြတယ် ယောကျာ်းလေးတွေထုံးစံအရ ကောင်မလေးတွေရှိရာကိုသွားကြရင်း အဲဒီသတ္တဝါမလေးရှိရာရောက်သွားပြီးရင်တုန်စရာခြောက်ခြားစရာအခန်းတွေကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာကြည့်ရှုခံစားကြည့်
Dvdrip 540p 590mb
ဟောင်ကောင် မှာ နာမည်ကျော် လူသတ်သမား General ဟာ လုပ်ငန်းရှင်ငွေရှင်ကြေးရှင်တွေကို မသတ်ခင် အသိပေးသော်လည်း လူသတ်မှုတွေ တစ်ခုပီးတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင် Bam lan ကိုကာကွယ်ဖို့ဟောင်ကောင် ရဲ John Ma ရဲ့ လက်ထဲမှာ လူသတ်သမား Generalကျရှုံးသွားပါတယ်။ John တစ်ယောက် ဒဏ်ရာရပီး ဆေးရုံတက်နေစဉ်မှာပဲ Profeasor Clavin Che နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ တစ်နှစ်အကြာပီးနောက် အာရှလုပ်ငန်းရှင်တွေ တွေ့ဆုံတဲ့ပါတီပွဲ မှာ စောင့်ကြည့်ဖို့John တာဝန်ကျတော့ အမှတ်မထင် General နဲ့ တစ်ပုံတည်း တူတဲ့ လူဆိုးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ General အသစ် တယောက် ထွက်ပေါ်လာပီး John ကိုထပ်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်။ ရဲအဖွဲ့က အသစ်ပြန်ပေါ်လာတဲ့ General နဲ့ပုံစံတူ လူသတ်သမားကို ဘယ်လိုဖမ်းဆီးမလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Sharon ကိုးသောက်ပွဲမှာကယ်ခဲ့တဲ့ ရဲ ဟာ သူ့ ရဲ့ ရည်းစားGeneral ကို သတ်တဲ့ သူဖြစ်နေမှန်းsharon သိသွားတဲ့ အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခဲ့တယ်။ သေသွားတဲ့ Dr.Ko အမှုကိုပြန်စစ်ကြည့်တော့ ထိုင်ဝမ်မှာ professor Clavin Che တစ်ယောက်ပဲရှိနေကြောင်း John Ma သိသွားတဲ့အခါ တတ်တဆိတ်စုံစမ်းဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် Calvin Che ကိုယ်တိုင်ကလဲ အသည်းအစားထိုးခွဲစိတ်မှုလုပ်ထားရတယ် ဆိုတာနဲ့ ခွဲစိတ်မှုခံယူပီးနောက် စိတ်ပညာရှင် တစ်ယောက် ဘာကြောင့် ဖောက်ပြန်ပီးစိတ်ရိုင်းဝင်သွားလဲဆိုတာ Heartfall Arises မှာ ဆက်လက်ရူစားရမှာပါ။
IMDb (5.4/10)….Rotten Tomatoes(83%)
အိန္ဒိယ သိပ္ပံနဲ့ စွန့်စား မှု တွေပါ ၀င်တဲ့ super hero ဇာတ်ကား တစ်ကား ဖြစ်တဲ့ Krrish3ဟာ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့က
ထွက်ရှိခဲ့ပါ ပြီ။ အနောက်တိုင်း animated ရုပ်ရှင်ကား တွေကို ယှဉ်နိုင်တဲ့ Bollywood ရုပ်ရှင် တွေရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ဖော်ပြ
နိုင်တဲ့ super hero ဇာတ်ကား တစ်ကား ဖြစ်ပါ တယ်။ အရင် ဇာတ်ကားတွေ ဖြစ်တဲ့ Koi….Mil Gaya (2003) အဓိပ္ပါယ် ကတော့
I…found someone နဲ့ သူ့ရဲ့ နောက်ဆက် တွဲ Krrish (2006) တို့ဟာလည်း အောင်မြင်ခဲ့ တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ
ဇာတ်ကား မှာ တော့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ Kasauli မြို့လေးမှာ Rohit (ရိုဟစ်) ဆိုတဲ့ ဥာဏ်ရည် မမီတဲ့ ကလေးစိတ်မပျောက်သေးတဲ့
ကောင်လေးတစ်ယောက် နဲ့ သူ့ဖခင် Dr.Sanjay Mehra တီထွင်ထားတဲ့ computer က အာကသ ထဲကိုလွှတ်လိုက်တဲ့ ရေဒီယို လှိုင်းတွေ
ကြောင့် ရောက်လာတဲ့ ဂြိုလ်သား လေး jadoo (ဂျာဒူး) တို့ ရဲ့အကြောင်းပါ ။ နောက်ပိုင်းတွေ မှာ jadoo ရဲ့ အကူအညီနဲ့ သူချစ်နေတဲ့
ကောင်မလေး Nisha (နီရှာ) ကို ကြိုးစားပုံ တွေ jadoo ရဲ့ စွမ်းအားတွေ လက်ခံ အပြီး အရင်ပုံ စံနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် လုံးလုံး ဖြစ်သွားပုံ တွေ
ကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းကျောရိုး ဟာ 1982 က Hollywood နာမည်ကျော်ဇာတ်ကား E.T , the Extra-Terrestrial ရဲ့ လွှမ်းမိုး
မှုတွေ အများကြီး ရှိတယ် လို့ ဝေဖန်ခြင်းတွေ ခံခဲ့ရပါတယ်။ Rohit နောက်သူ့ သား Krrishna (ကရစ်ရ်ှနာ) ရဲ့ အကြောင်း ကတော့ လုံးဝ လူစွမ်းကောင်း
ဇာတ်ရုပ် အဖြစ်ကူး ပြောင်းသွားပါတယ်။ Krrish ဇာတ်ကား ထဲမှာတော့ Krrishna တစ်ယောက် ဟာ အဖေ ရော အမေရော မရှိ တော့ဘဲ
အဖွားဖြစ်သူ Sonia (ဆိုနီယား) နဲ့ အိန္ဒိယ မြောက်ပိုင်းက တောင်ပေါ်ရွာ လေးတစ်ရွာမှာ ဇာတ်မြှုပ်နေနေရာကစပါတယ်။ Sonia က သား
ဖြစ်သူ ရဲ့ သဘာဝလွန် စွမ်းအား တွေကြောင့် သားရော ချွေးမပါ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက် အဖေ့အမွေ ရထားတဲ့ မြေးလေး Krrishna ကို
အစွမ်းတွေ ထုတ်မသုံးဖို့ တားခဲ့ရာက Krrishna က အဖွားအသိအောင် တောင်ပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ စွမ်းအား တွေကို ခိုးပြီး လေ့ကျင့်ရင်း
တောင်တက်အဖွဲ့က မြို့သူချောလေး Priya (ပရီယာ) ကို စွဲလမ်းပြီး မြို့ကိုလိုက်သွားပါတယ်။ မြို့ပြမှာ Krrishna က ဆပ်ကပ် ပွဲတစ်ခုရဲ့
ပေါက်ကွဲမှုကနေ လူကယ်ရင်း သူ့စွမ်းအားတွေကို လူသိမခံဘဲ အသုံးချဖို့ နည်းလမ်းတွေ့သွားပြီး အနာဂတ်ကို ဟောနိုင်တဲ့ စက်တစ်လုံး
တည်ဆောက်မှုမှာ အသုံးချဖို့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ သူ့အဖေကို ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားပုံတွေကိုလည်း တွေ့ ရမှာပါ။ အခု Krrish3မှာတော့
Rohit နဲ့ Krrishna တို့သားအဖဟာ မွန်ဘိုင်းမြို့မှာ သူတို့ရဲ့ အစွမ်းအစတွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို အကြိုးပြုနေကြပါတယ်။ Rohit က သေသူ
ကိုအသက်ပြန်သွင်းနိုင်တဲ့ စက်ကြီးတစ်လုံးတည်ဆောက်နေပြီး Krrishna ကတော့ Priya နဲ့ လက်ထပ်ပြီး Krrish တစ်ဖြစ်လဲ အနေနဲ့
ဒုက္ခရောက်နေသူ တွေကို ကူညီလျှက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ရင်ဆိုင်ရ မယ့် စူပါဗီလိန်ကတော့ Dr.Kaal ဖြစ်ပါတယ် ။ အာဖရိက ဘက်မှာ
ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် က မွန်ဘိုင်းကိုပြန့်နှံ့လာနေပြီး ဖြေဆေးကို Rohit က အချိန်မီရှာရမှာပါ။ ပြီးတော့ Dr.Kaal ရဲ့ လူတစ်ပိုင်း တိရိစ္ဆာန်
တစ်ပိုင်း Maanvars လို့ခေါ်တဲ့ Mutant တွေက မွန်ဘိုင်းမြို့ကြီးရဲ့ ကယ်တင်ရှင် Krrish ကို တိုက်ခိုက်ပုံတွေ ကို အသည်းတယားယားနဲ့
ကြည့် ကြရမှာပါ။ သေသပ်လှတဲ့ Animation effect တွေနဲ့ Hrithik Roshan, Vivek Oberoi, Priyanka Chopra, Kangna Ranaut တို့
ဦဆောင်ထားပြီး ဒါရိုက်တာ Rakesh Roshan ရဲ့ လက်ရာကားကောင်းတစ်ကားပါ။ Hrithik က Rohit ရော Krrishna အဖြစ်ပါ သရုပ်ဆောင်
ထားပါတယ်။ Priyanka Chopra ကတော့ Priya အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
(ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို Channel D မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
Watch And Download Pcloud (1.1GB)
Watch And Download Direct Link (1.1GB)
Watch And Download Pcloud (540MB)
Watch And Download Direct Link (540MB)
Labels: Action, Adventure, Bollywood, Drama, Romantic, Sci-Fi
Krrish (2006) - မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb (6.3/10)….Rotten Tomatoes(100%)
မင်းသား Hrithik Roshan ရဲ့နာမည်ကျော် ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်ကား Koi….Mil Gaya (2003) ရဲ့အဆက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
Rohit နောက်သူ့ သား Krrishna (ကရစ်ရ်ှနာ) ရဲ့ အကြောင်း ကတော့ လုံးဝ လူစွမ်းကောင်း
တည်ဆောက်မှုမှာ အသုံးချဖို့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ သူ့အဖေကို ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားပုံတွေကိုလည်း တွေ့ ရမှာပါ။
ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို Channel D မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။
(ဘာသာပြန်ထားသူကတော့ Aye Nyein Thu Hein ဖြစ်ပါတယ်။)
Watch And Download Pcloud (1.3GB)
Watch And Download Direct Link (1.3GB)
Watch And Download Pcloud (660MB)
Watch And Download Direct Link (660MB)
Koi… Mil Gaya (2003) - မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb (7.1/10)….Rotten Tomatoes(75%)
မင်းသား Hrithik Roshan ရဲ့နာမည်ကျော် ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
Koi….Mil Gaya (2003)
အဓိပ္ပါယ် ကတော့ I…found someone ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကား မှာ တော့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ Kasauli မြို့လေးမှာ Rohit (ရိုဟစ်) ဆိုတဲ့ ဥာဏ်ရည် မမီတဲ့ ကလေးစိတ်မပျောက်သေးတဲ့
မှုတွေ အများကြီး ရှိတယ် လို့ ဝေဖန်ခြင်းတွေ ခံခဲ့ရပေမယ့် လူစွမ်းကောင်း Krrish မွေးဖွားဖို့ ဒီဇာတ်ကားပအစပြုထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်လဲ အတော်ကောင်းမွန်ပြီး Rating မြင့် ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားပါ။
Watch And Download Direct Link (680MB)
Labels: Bollywood, Drama, Fantasy, Romantic, Sci-Fi
Friday the 13th 2009 - မြန်မာစာတန်းထိုး
1980 ပြည့်နှစ်များကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Friday the 13th ဆိုတဲ့ horror flim series လေးကိုပြန်လည် အသက်သွင်း reboot လုပ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
2009 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရိုက်ကူးသူကတော့ horror ကားတွေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းလေ့ ရှိတဲ့ Director Macus Nispel ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ညီမလေးကို လိုက်ရှာနေတဲ့ Clay နဲ့ တောတွင်းစခန်းချ အပန်းဖြေခရီးထွက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်တို့ ဘယ်လိုထိတ်လန့်ဖွယ်ရာတွေကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကတော့…
Clay အဖြစ်နဲ့ ကတော့ နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲ SUPERNATURAL မင်းသား Jared Padalecki( ဆမ်) ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Flash Series ထဲမှ ဆရာဝန်မလေးဖြစ်တဲ့
Caitlin Snow လည်းပါဝင်ထားတဲ့ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်….
IMDb rating 5.6 ရရှိကာ Box Office ဝင်ငွေ $91.4 million ရရှိထားတဲ့ Horror ကားကောင်းလေးပါ…ဒီကားကိုအညွှန်းနဲ့ခံစားဘာသာပြန်ထားပေးသူကတော့ Ko Jae ပဲဖြစ်ပါတယ်….
File size…(953 MB )
Pokemon :Volcanion and mechanical marvel(2016)မြန်မာစာတန်းထိုး
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ပိုကီမွန် ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီကားလေးဟာဆိုရင်ဖြင့် ပိုကီမွန် ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ ၁၉ ခုမြောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီးတော့ ၂၀၁၆ ခုနစ် မှာ ထွက်ရှိထားခဲ့ပြီး imdb 6.2/10 ရရှိထားခဲ့တဲ့ animation ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်
ပိုကီမွန်ကားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ပင်တိုင်ဇာတ်ကောင်လေး ၂ကောင်ဖြစ်တဲ့ Ash နဲ့ Pikachu တို့ကအဓိကပါဝင်ထားကြပါတယ်.
လွန်ခဲ့သော နှစ် ၅ဝဝ ခန့်က Nikola ဆိုတဲ့ သိပံ္ပပညာရှင်ကြီးတစ်ယောက်ဟာ Azoth တိုင်းပြည်ကို အချိန်ခရီးသွားစက်နဲ့
ဆောင်ကျဉ်းပေးခဲ့ပါတယ် သူ့ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေအများကြီးထဲကမှ Magearna ဆိုတဲ့ ပိုကီမွန်လေးကတော့ သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိတဲ့ လူဆိုးတွေဟာ Magearna လေးကိုလိုက်ဖမ်းပါတော့တယ်.သူ့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ Volcanion ဆိုတဲ့ပိုကီမွန်ကြီးနဲ့ Ash တို့သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်နဲ့တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာတော့.......
နောက်ပိုင်းဘယ်လ်ိုတွေဖြစ်မလဲ ပိုကီမွန်နဲ့လူသားတွေကြား ဘယ်လိုဆက်နွယ်မှုတွေရှိမလဲ သူတို့တွေရော Magearna ကိုကယ်နိုင်မှာလားဆိုတာကိုတော့....အားလုံးပဲဆက်လက်အားပေးပါအုံးလို့
Review & Translate by Morningstar Naing Lin
Hd 720p 670mb
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီး အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ ၂၀၁၆ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာထွက်ရှိထားတဲ့ Crying Out In Love ဆိုတဲ့ တရုတ်အချစ် ဇာတ်ကားေ လး ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ ၂၀၀၄ခုနှစ်က အရမ်းကိုကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Socrates In Love ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေးကိုပြန်လည် ဆန်းသစ်ထားတဲ့ဇာတ်ကား ကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်ရှင့် ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ ခီဒါဆိုတဲ့ အရှက်ကြီးတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားလေးဟာ လှပပြီး ရေကူးကျွမ်းကျင်တဲ့ အတန်းဖော် ကောင်မလေး ရှောင်ရီကို မေတ္တာသက်ဝင်နေပါ တယ်၊ ခီဒါဟာ ရှောင်ရီလေးအတွက် အသံသွင်း ကတ်ဆက်လေး လက်ဆောင်ပေးချင်တဲ့အတွက် ရေဒီယို အစီစဉ် တစ်ခုမှာ ဝတ္ထုရေးခဲ့ပါတယ်၊ ဝတ္ထုထဲက အတိုင်း ရှောင်ရီလေးဟာ ကင်ဆာ ရောဂါနဲ့ဆေးရုံတတ်တဲ့အချိန်မှာ နာမည်တူ ရောဂါတူတဲ့ အခြားရှောင်ရီတစ်ယောက် ပေါ် လာတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ် မလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဖို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင့်....
Review & Translate by Theint Thazin Naing
Hd 720p 680mb
Cheeky ဆိုတဲ့ ဇတ်လမ်းလေးဟာ Comedy & Drama ဆိုပေမယ့် သာမန် 18+ ရုပ်ရှင်ကားတွေထက် အများကြီးဆိုးပါတယ်
သတိပြုသင့်တာက မိသားစု နှင့် အတူ မကြည့်သင့်သလို 18 နှစ်အထက် အသက်ပြည့်ပြီးသူများသာ ကြည့်သင့်ပါတယ်…
Unrated အမျိုးအစား ဖြစ်လို့ အကုန်လုံး မြင်သာထင်သာ ပြသထားတာမို့ ဆင်ဆာ မဖြစ်ထားပါဘူး…
ဇတ်လမ်းပုံစံ ကတော့ ကာလာ ဆိုတဲ့ ချောမောလှပပြီး ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ အီတလီ သူလေးဟာ ရည်းစားများပြီး ပွေရှုပ်တက်သူပါ
တစ်ရက်မှာတော့ မက်တဲယို ဆိုတဲ့ကျောင်းသား ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ချစ်ကြိုက်မိသွားပါတယ်….
မက်တဲယို နှင့် သူမ အတူတူ နေထိုင်ဖို့ တိုက်ခန်း ရှာဖွေရင်း တိုက်ခန်းရှာဖွေပေးတဲ့ လိင်တူချစ်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်လဲ
ဇတ်လမ်းတွေ ဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ် ဒါကို မက်တဲယို သိပေမယ့် မိန်းကလေး အချင်းချင်း မို့ ဘာမှ မပြောသေးပါဘူး
တစ်ရက်မှာတော့ ကာလာ ရဲ့ အိမ်မှာ သူမ ယူခိုင်းတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ သွားယူရင်း မက်တဲယို တစ်ယောက် ကာလာ ရှုပ်ပွေထားတဲ့
မနာလိုချင်း သ၀န်တိုချင်း များစွာဖြင့် ကာလာ နောက် လိုက်သွားရင်း ထိုကိစ္စ များ ရှင်းပြပေးရန် မက်တဲယို မှ ကျိန်းမောင်းပေမယ့်
ကာလာ ကတော့ လိမ်မြဲလိမ်နေပါသေးတယ် ဒါကြောင့် ကာလာ အား မိမိအား မလိမ်မညာပဲ လိင်ဆက်ဆံခဲ့သူတွေအကြောင်း
ခရေစေ့ တွင်းကျ မေးပါတော့တယ်…
မက်တဲယို က ရည်းစားများလွန်းပြီး လူတကာ နှင့် အိပ်သော ကောင်မလေး ကာလာ ကို တကယ် ပြန်လက်ခံနိုင်ပါ့မလား
ကာလာ ကရော သူတကယ်ချစ်တဲ့ မက်တဲယို ကို ပွင့်လင်းနိုင်မလား အမှန်တိုင်းပြောပါ့မလား ဆိုတာကတော့
ဘာသာပြန် Tariq L Walker ၏ ခံစားတင်ဆက်မှု အား ကြည့်ရှုလိုက်ပါစို့….
Watch And Download Pcloud (640MB)
Watch And Download Direct Link (640MB)